५ श्रीमान् की यी एक्ली पत्नी !
हामी सबैले महाभारत कालमा ५ वटा पति र तिनकी एक पत्नी द्रौपदीको कथा सुन्दै आएका हौं । तर २१ औँ शताब्दिमा पनि विश्वकै अनौठो दृश्य जुन भारतको दहरादुनमा देखीएको छ राजो वर्मा नाम गरेकी महिलाको जीवनमा पनि द्रौपदीको जस्तै ५ वटा पति छन् र सबै पालै पालो सँग श्रीमतीको साथ प्रेम र रात बिताउँछिन् । यद्यपी उनीहरु सबैजना एक अर्काबिच उत्तिकै प्रेम गर्छन् । गरिब परिवारका यि दाजुभाईको घरमा जम्मा एउटै कोठा छ उनीहरु श्रीमतीसँग दिनमा १ जनामात्रै सँगै सुत्छन् ,जहाँसम्मकी उनले आफुले जन्म दिएकी १८ महिने छोरी कुन श्रीमानको संभोगबाट जन्मिएकी हुन् थाहा छैन । महाभारतमा जस्तै उनीहरु बीच कुनै मनमुटाव तथा द्वेश छैन मिलेर बस्छन् श्रीमती पनि हरेक सँग समान माया र आदर भाव गर्छिन एक भाई श्रीमती सँग हँदा अरु सबै बाहिर मझेरीमा सुत्छन् अनी आ आफ्नो पालो कुरेर श्रीमतीको कोठीमा जान्छन् । जुन कुरा देहरादूनको हिमालय गाउँको परम्परा अनुसार एक जना भाईसँग बिहे गरे उसका सबै भाईलाई श्रीमान् मान्नुपर्ने भएपछि राजमोले सबैलाई श्रीमानका रुपमा अपनाएकी हुन् । जुन विश्वकै अनौठो परम्पराका रुपमा सबैले हेर्दै आएका छन् ।
भारत-चीन सम्बन्ध चिसियाे, चीनले किन यस्ताे भन्याे ?
भारतसँग दोक्लम विवादपछि पहिलो ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्दै चीनले नेपाल भ्रमणमा जाने आफ्ना नागरिकलाई भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सचेत गराएको छ । नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र यात्रामा सचेत हुन भन्दै चीनले सीमाक्षेत्रमा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधार र सवारीसाधनको कुनै तस्बिर नखिच्न पनि आग्रह गरेको भारतीय समाचारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। उसले यहाँका बजार नघुम्न, राति बाहिर नजान र प्राकृतिक विपत्ति, चोरी, यात्रामा विवाद लगायत कुनै पनि समस्या भइहालेमा नेपाल प्रहरी र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनेको छ। चीन र भारतबीच गत जुन १६ देखि दोक्लम विवाद सुरू भएको थियो। दोक्लम क्षेत्र चीन र भुटान दुवैले आफ्नो भूमि भन्दै आएका छन्। दोक्लममा सेना पीएलएले सडक निर्माण गर्न थालेपछि भुटान-भारत सीमा पार गरी भारतीय सेना दोक्लम गएका थिए। भारतले भुटानको अनुरोधमा आफ्ना सेना त्यहाँ गएको जनाएपनि भुटानले त्यसबारे प्रस्टसँग बोलेन। ७३ दिनसम्म दुई देशबीच तनाव भएपछि अन्ततः अगस्ट २८ मा भारतीय सेना त्यहाँबाट हटेका थिए। चिनियाँ सेनाले भने त्यहाँ गस्ती गरिनै रहने बताएको थियो ।
मान्छेले मान्छेको मासु खाने खुलासा भए पछि खैलाबैला मच्चियाे !
नोमसा मसेक, बीबीसी न्यूज, दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुलु-नटाल प्रान्तको शायामोया गाउँमा टाउको विनाको एउटा शव भेटिएपछि स्थानीयवासीमा अहिले त्रास फैलिएको छ। गत जुलाइ महिनादेखि हराइरहेकी २५ वर्षीया जानेले लाशवेयो मान्छेको मासु खाने एउटा समूहको शिकार बनेको ठानिएको छ। सो समूहसँग सम्बद्ध भएको आशंकामा अहिलेसम्म पाँचजना पक्राउ परेका छन्। परम्परागत उपचारकले गत हप्ता प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि कुहिएको अवस्थामा लाशवेयोको शव भेटिएको थियो। मान्छेका कान ती उपचारकले मान्छेको मासु खाँदा-खाँदै आफूलाई दिक्क लागिसकेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्। शुरुमा प्रहरीले उनको कुरा पत्याएनन्। प्रमाणको रुपमा ती उपचारकले रक्ताम्मे हात र पैतला देखाएपछि प्रहरीले तत्काल उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो। त्यसपछि उनले आफू भाडामा बस्दै आएको घरमा प्रहरी अधिकारीहरुलाई लगे, जहाँ प्रहरीले पकाउने भाँडामा मान्छेका आठवटा कान फेला पारे। उपचारकले मान्छेका कानहरु आफ्ना ग्राहकका लागि राखेको ठानिएको छ। ग्राहकहरुलाई कानमा चमत्कारी शक्ति रहेको र त्यो खाएपछि पैसा, शक्ति र सुरक्षा दिने भनिएको थियो। डीएनए परीक्षण सुटकेसभित्र अरु मानव अंगहरु पनि भेटाइएको थियो। झाक्रीको झुपडीमा भएका मानव अंगहरुका बीच लाशवेयोको शव र च्यातिएका लुगाहरु भेटिएका थिए। उनको परिवारका सदस्यले लाशवेयोका लुगाहरु चिनेका थिए।प्रहरीले लाशवेयोकै शव भएको सुनिश्चित गर्न उनका दुई वर्षीय छोरासँग डीएनए मिलाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।लाशवेयोको परिवारले अझै उनको अन्तिम संस्कार गरिसकेको छैन।आँसु पुछ्दै लाशवेयोकी नोजिफो एन्टेलेले भनिन्, “हामीले अनुमान मात्रै लगाउन सक्छौँ कि लाशवेयोले जिन्दगीका लागि कसरी
मेस्सीको ह्याट्रिकले बार्सिलोनाको शानदार जित
लियोनल मेस्सीको ह्याट्रिकको मद्दतमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलको नयाँ सिजनमा विजयी यात्रा कायम राखेको छ । लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले स्पानियोललाई ५–० ले हरायो । बार्सिलोनाको जितमा मेस्सीले २६, ३५ र ६७ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे । मेस्सीले बार्सिलोनाबाट गरेको यो ३८ औं ह्याट्रिक हो । यस्तै ८७ औं मिनेटमा जेराड पिके तथा ९० औं मिनेटमा लुइस स्वारेजले गोल गरेपछि बार्सिलोनाले ५–० को शानदार जित दर्ता गर्‍यो । यो खेलमा उस्मान डेम्बेलेले बार्सिलोनाबाट डेब्यु गरेका थिए । उनी ६८ औं मिनेटम सबस्टिच्युडको रुपमा मैदान छिरेका हुन् । जितपछि शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको ३ खेलबाट ९ अंक भएको छ । राति नै भएको खेलमा लेभान्टेसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको रियल मड्रिड तीन खेलबाट पाँच अंकसहित छैटौं स्थानमा छ । राति भएका अरु खेलमा सेभिल्लाले एइबरलाई ३–० ले हरायो भने भ्यालेन्सिया र एथ्लेटिको मड्रिडले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । फाेटाे फिचरहरू
लागूऔधष ओसारपसार अभियोग जापानमा दुई नेपाली बिद्यार्थी पक्राउ
टोकियो । लागूऔषध ओसारपसारमा संग्लग्न रहेको आरोपमा जापानी प्रहरीले दुई नेपाली बिद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरु पक्राउ परेको दुई महिना अगाडि नै हो । तर जापानी प्रहरीले अहिलेमात्र सार्वजनिक गरेको जापानी मिडियाले जनाएका छन् । भोकेसनल स्कुल पढ्दै गरेका २९ बर्षीय तापन तामाङ र पोखराकी २७ बर्षीया देवी गुरुङ दोङलाई जापान प्रहरीले टोकियोस्थित उनीहरुकै निवासबाट प्रकाउ गरेको हो । जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीहरुले भारतको हवाई बाटो हुँदै ठूलो मात्रामा गाँजा, भाङ, चरेससहितका नशालु लागुऔषध, बाद्यबादन सामाग्रीभित्र राखेर जापान भित्र्याएका थिए । उक्त सामाग्री तामाङ र गुरुङ बस्दै आएको कोठामा कुरियर मार्फत पुगेपछि लागुऔषध ओसारपसारमा उनीहरुको संलग्न रहेको भन्दै जापान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट १८ किलो ६ सय ग्राम लागुऔषध फेला पारेको बताएको छ । बरामत गरिएको लागुऔषधको बजार मुल्य करिव १५ करोड येन भएको प्रहरीले दावी छ । जापानमा लागुपदार्थ ओसारपसारमा नेपालीको ठुलो गिरोह संलग्न हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
२ फागुन, काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी कारबाहीपछि अमेरिकामा बसोवास गरेका हजारौँ आप्रवासी तनावमा परेका छन् । आप्रवासी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि छापा तीव्र पारेको हो । ट्रम्पले तीन साताअघि गैरकानुनी आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकामा ३० लाख आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुरूप प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो । एटलान्टा, सिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जल्स, नर्थ क्यारोलाइन, साउद क्यारोलाइनालगायतका राज्यमा बसोवास गर्ने आप्रवासीमाथि प्रहरीले छापा मारेको वासिंग्टन पोस्टले जनाएको छ । प्रहरी छापाका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रास उत्पन्न गरेको आप्रवासीको अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिने ट्रम्प प्रशासनले अपराधको अभियोग लागेका वा अदालतले दोषी ठहर गरेका आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्ने जनाएको छ । आप्रवासीमाथिको छापा नियमित कार्य भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘आप्रवासीमाथिको अनुसन्धान नियमित कार्य हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रेस सेक्रेटेरी गिलियन क्रिस्टिेनसेनले
भारतमा पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी परेवा भागेपछि खैलाबैला
एजन्सी,माघ २८ / भारतीय भूमिमा पक्राउ परेको एक पाकिस्तानी परेवा हिरासतबाट उम्किए पछि भारतीय सुरक्षाकर्मी चिन्तित भएका छन्। छिमेकी मुलुक पाकिस्तानबाट भारतीय भूमिमा जासुसी कार्यमा प्रयोग गरिएको भन्दै उक्त परेवालाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले मंगलबार पक्राउ गरेका थिए। त्यसपछि उक्त परेवालाई पंजावको श्रीनगर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यम इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार बन्दि बनाइएको उक्त परेवालाई त्यहाँका एक प्रहरीले उत्सुकता पुर्वक हेर्न पिंजडा खोल्ने बित्तिकै परेवा उम्किएको थियो। त्यसपछि उक्त परेवा पाकिस्तान तर्फ नै उडेको थियो। परेवा भागेपछि प्रहरीले भारतीय जासुसी निकायलाई खबर गरेका थिए। उक्त परेवामा ‘जनबाज खान ५५४७’भन्ने ट्याग र एउटा फोन नम्बर भएको संचार माध्यमले बताएका छन्। पाकिस्तानले जासुसी प्रयोजनका लागि चराहरु भारत पठाउने गरेको भारतले आरोप लगाउने गरेको छ। विगतमा पनि भारतले त्यस्ता धेरै चराहरु पक्राउ गरेको थियो।
माघ २८ बीबीसी / डोनल्ड ट्रम्पलाई सत्ता सुम्पिएपछि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो शौख पूरा गरिरहेका छन् । केहि दिन अघि उनी आफ्ना अर्बपती साथी रिचर्ड ब्रेन्सनसँगै उनको द्वीप मसकिटो आइल्याण्डको नेकर तटमा भेटिएका छन् । ओबामाको छुट्टीबारे रिचर्डले आफ्नो ब्लगमा पूर्व राष्ट्रपति ओबामा र उनकी श्रीमती मिशेलले बेलायतको भर्जिन आइल्याण्डमा केही दिन बिताएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले उनी सर्फिङ गर्न हवाई आइल्याण्ड गएको उनले आफूलाई जानकारी दिएकोसमेत उनले उक्त ब्लगमा लेखेका छन् । ओबामालाई उद्धृत गर्दै रिचर्ड लेख्छन्, ‘जब म सर्फिङ गरेर फर्किएको थिएँ तब मलाई मेरो सुरक्षा अधिकारीले यो पछि तपाईं वर्षौंसम्म सर्फिङ गर्न पाउने छैनन् । ’ पछिल्लो आठ वर्षमा न ओबामाले सर्फ गर्न सके न त पानीमा खेलिने खेलको मजा नै लिन सकेका थिए ।यसै वर्ष जनवरीमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सुम्पिएपछि ओबामाले आफ्नो परिवारलाई धेरैभन्दा धेरै समय दिइरहेका छन् । ओबामा र उनकी श्रीमती मिशेलले केही दिन ब्रेन्सनसँगै उनको आइल्याण्डमा बिताए ।
बंगाली नायिकाको शव आधा कुहिएको अवस्थामा फेला
माघ २६ , एजेन्सी /बंगाली मनोरञ्जन उद्योगमा छोटो समय काम गरेकी नायिकाको शव बुधबार उनको कोलकातास्थित फ्ल्याटबाट पुलिसले बरामद गरेको छ । बितास्ता शाहाको आधा कुहिएको शरिर कोलकाताको दक्षिणी भागमा अवस्थित कास्बामा रहेको उनको फ्ल्याटमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो । लगभग दुई दिनदेखि उनलाई गरिएको अनेकौं फोन नउठेपछि उनकी आमा उनलाई भेट्न फ्ल्याटमा पुगेकी थिइन् । बितास्ता फ्ल्याटमा एक्लै बस्ने गर्दथिन् । निकै बेरसम्म ढोका ढक्ढकाउँदा पनि ढोका नखोलेपछि बितास्ताकी आमाले छिमेकीको सहयोगमा पुलिसलाई खबर गरेका थिए । पुलिसले ढोका फुटाएर हेर्दा उनको शव सिलिङमा झुण्डिरहेको अवस्थामा भेटिएको पुलिसले जानकारी दिएको छ । बितास्ताको नारी पनि काटिएको र उनको शरिरमा घाउको विभिन्न दाग पनि देखिएको बताइएको छ । सुरुवाती अनुसन्धानमा बातिस्ताले आत्महत्या गरेको देखिन्छ तर हामी पोस्टमार्टम रिपोर्टको पर्खाइमा छौं । उनको मृत्यु दुई दिन अघि भएको बताइएको छ । उनको कोठा गन्हाएको थियो,’ एक पुलिस अधिकारीले बताएका छन् । बितास्ता थुप्रै दिनदेखि डिप्रेसनमा भएको पुलिसले दाबी गरेको छ । ‘हामीले उनको फेसबुक प्रोफाइल र पोष्ट हेर्यौं । जसमार्फत थाहा भयो कि उनी लामो समयदेखि डिप्रेसनको शिकार थिइन् । एक पटक उनले आफ्नो जीवनको अन्त्य गराउने बताएकी थिइन् । हामी सबै कुरा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । उनले कल डिटेलसमेत,’ पुलिसले बताए ।
ट्रम्पको आदेशविरुद्ध अस्थायी रोक
२२ माघ/सियाटलका एकजना न्यायाधीशले मुसलमान बहुल रहेको सात देशका यात्रुहरुमाथि अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयमाथि देशव्यापी रुपमा अस्थायी रोक लगाउने आदेश दिएका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायबारे यो अहिलेसम्मकै एउटा वृहत आदेश हो। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि ६० हजार यात्रा अनुमतिपत्रहरु रद्द गरिएको जनाएको छ। चुनौती सरकारी वकिलहरुले राष्ट्रपतिले दिएको कार्यकारी आदेशलाई कुनै पनि राज्यले चुनौती दिने ठाउँ नरहेको भन्ने दाबी गरिरहेका बेला संघीय न्यायाधीश जेम्स रोबर्टको यस्तो आदेश आएको हो। गत साता ट्रम्पले मुसलमान बहुल रहेको सात देशका आप्रवासीहरुको अमेरिका प्रवेशबारे गरेको कार्यकारी आदेशले जनप्रदर्शनहरु निम्त्याएका छन्। उक्त आदेशले अमेरिकी विमानस्थलहरुमा दुविधाको वातावरण श्रृजना गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनमाथि महत्वपूर्ण चुनौती दिएको पछिल्लो आदेशविरुद्ध सरकारले तत्कालै पुनरावेदन दिने ठानिएको छ। यसअघि नर्वेका पूर्व प्रधानमन्त्री हेल माग्ना बुलभिकले एकसाता अघि अमेरिकाको विमानस्थलमा आफू थुनामा परेको बताएका छन्। आफूसँग इरानको यात्रा अनुमतिपत्र भएकाले उनकै शब्दमा त्यस्तो उत्तेजनात्मक कदम चालिएको हुनसक्ने उनले बताएका छन्। दाबी ट्रम्पले अमेरिकाको रक्षा गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै उक्त प्रतिबन्ध मुसलमानहरुमाथि नभएको दाबी गरेका छन्। थुप्रै राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरुले कार्यकारी आदेश असंवैधानिक भएको बताएका छन्। यसअघि केही संघीय न्यायाधीशहरुले पनि राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध आदेश दिएका थिए। तर सियाटलका न्यायाधीशले दिएको यो पछिल्लो आदेश भने देशभरका लागि लागू हुनेछ।